China PAN-yakavakirwa Carbon Felt fekitori uye vagadziri | Huasheng
Polyacrylonitrile (PAN) yakavakirwa kabhoni yakanzwika yakarebesa mumhando, idiki mune chaiyo kupisa huwandu, yakapfava mune yekushongedza, yakanaka mu adiathermancy uye inoshanda mukushanda, inogona kuchengetedza simba rakawanda. Naizvozvo, kupisa kwemafuta epolyacrylonitrile base kwakanyanya kwakanyanya munzvimbo yekupaza kana yemukati, kunyanya, kuita kweiyo polyacrylonitrile base kwakagadzikana pasi pekupisa kwakanyanya mamiriro, uye ndiyo yakanakisa yekushisa insulation zvinhu zveVacuum Furnace.
Hukuru density (g / cm3)
Thermal conductor (1150oC W / m .k)
Kupwanya kusagadzikana (pa10% kudzvinyirira N / cm2)
Kugadziridza tembiricha (℃)
Mamiriro ekushanda mumhepo (℃)
Mamiriro ekushanda mumaputi (℃)
Mamiriro ekushanda mumaputi mune inert mumhepo (℃)
[PAN & rayon mutsauko]
1.PAN (PolyAcrylNitrile) yakaderera mumutengo.
2.PAN ine coarser fiber uye yakakura fiber dhayamita = Lower Surface nzvimbo.
3. PAN yakaoma uye ine "ichier" manzwiro. Rayon anonyanya kushanduka uye asingatsamwisi ganda.
4. Rayon yakadzika mune Thermal Conductivity pane PAN pamhepo inopisa kupfuura 1800 ° C.
Nezve kupisa kurapa zvinoshandiswa, PAN kabhoni yakanzwika ndiyo yakanyanya mutengo.
Zvekubata kureruka uye kupisa kwakanyanya kupisa, Rayon ndiyo yakanyanya sarudzo.
PAN-yakavakirwa kabhoni yakanzwika senge inoshandiswa mukati mekuputira uye inodzivirira mumhepo (isina-oxidizing) inopa uye michina yekushandisa inoshandiswa mukupisa kupisa, semi-conductor, ceramic, aerospace, kudzivirira, bio-medical appliance, uye indasitiri yesimbi.
Aya felts anoshandiswawo se cathode mune inoyerera bhatiri mashandisiro uye seyakaitika maficha kune mamwe akawanda ma-electro-makemikari maitiro. Zvinowanzoshandiswa nevatengi uye zvinoshandiswa zvinogadzirwa nemaindasitiri zvakaita semagumbeze emagetsi, mapango emapombi, girazi rinofuridzira mapads, zvikwangwani mumatura ekupedzisira, uye motokari dzinopera.
Easy kudura uye kuisa.
Yakadzika density uye yakawandisa mafuta.
Yakakwirira yemafuta inopikisa.
Pasi dota uye sarufa zvemukati.
Yepfuura: Paint Felt mat (mucheka wedhirowa wedhiza)
Inotevera: Akadhindwa Akanatswa